यसकारण गच्छदार काङ्ग्रेसमा सकिन सक्छन्
२०७६ मङ्सिर ७ शनिबार / Saturday, November 23
गाउँमा त्यो पहिलो रेडियो थियो । बाबाको लागि दाइले काठमाडौबाट जापनिज रेडियो ल्याइदिनु भएको थियो
२०७६ श्रावण ३१ शुक्रबार
काठमाडौ, गाउँमा त्यो पहिलो रेडियो थियो । बाबाको लागि दाइले काठमाडौबाट जापनिज रेडियो ल्याइदिनु भएको थियो । रेडियो एकदमै बलियो थियो । कहिले काहीँ गाउँका मान्छेहरु रेडियो हेर्न हाम्रो घर आउथे । उहाँहरु रेडियोमा गित सुनेर मख्ख पर्थे ।
सानो छ्दा मैले बाबालाई एकदमै सताए, बाबा पनि रक्सी खाएर कहिले काहीँ सताउनु हुन्थ्यो । अनि बदलामा मैले राती संगै सुतिरहेको बेला बाबाको अङ्गुच्छा (धोती) मा पिसाब फेरदिन्थे, तैपनी बाबाले केही पनि भन्नु हुन्न थियो । आमाचाही बिहान बेस्सरी गाली गर्नु हुन्थ्यो । पाँच भाइ मध्ये म बाबाको एकदमै प्यारो छोरा थिए । ८ कलास पढ्दासम्म बाबासंगै सुत्थे । उहाँ एकदमै समाचार सुन्नु हुन्थ्यो । मलाइ चाहिँ गित सुन्न मन पर्थ्यो ।
बाबाछोराको कहिलेकाही यहि कुरामा झगडा पर्थ्यो । बाबाले सम्झाउदै भन्नू हुन्थ्यो ''छावा समाचार सुन परत देश बिदेश म का का हुइता बुझ परत (छोरा समाचार सुन्नुपर्छ देश बिदेशमा के के भैराछ बुझ्नुपर्छ ।) '' तर मेरो जिद्दीको अगाडी बाबा झुक्नु हुन्थ्यो ।
''बदलामा मैले राती संगै सुतिरहेको बेला बाबाको अङ्गुच्छा (धोती) मा पिसाब फेरदिन्थे''
अहिले बाबा र दाइ बितेर गएपनी त्यो रेडियो जस्ताको त्यस्तै सुरक्षित छ । उहाँले बिपि कोइरालाको नाम धेरै लिनु हुन्थ्यो । सायद बि पि को बिचारबाट निक्कै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो होला । राजनीति नबुझेपनी धेरै पटक हाम्रो परिवारले काङ्ग्रेसलाई जिताएको इतिहास छ ।
२०५४ सालको चुनाबमा दाइले काङ्ग्रेस पार्टीबाट वडा अध्यक्षमा चुनाब जित्नु भयो तर मैले जिन्दगीमा उहाँको भाषण सुनेन । राजनितीक रुपमा हेर्दा मेरो परिवार काङ्ग्रेसको बिल्ला भिरेको परिवार हो तर माओवादीको जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र २०६४/०६५ को थरुहट आन्दोलनले नयाँ युवा पिढिलाइ राजनितीक चेतना खोली दियो ।
''आदिवासी जनजाति आन्दोलन र २०६४/०६५ को थरुहट आन्दोलनले नयाँ युवा पिढिलाइ राजनितीक चेतना खोली दियो । ''
राजनीतिक मुलधारमा नआए सम्म जातीय मुक्ति सम्भब छैन भन्ने कुरा अहिलेको युवाले राम्ररी बुझेका छन् । आफ्नो पहिचान र जातिय मुक्तिको लागि विभिन्न पहिचान र अस्तित्वसंग जोडिएको दलहरूमा संघर्स गरे तर ठुला दलका ठुला शासकहरुले धेरै वर्ष टिक्न दिएनन् । मुक्ति र पहिचानसंग जोडिएको दललाइ कानुनी रुपमा मेटाएर फेरि आफ्नै पार्टीमा ल्याउने बाध्यत्मक बाटो बनाइदिए ।त्यस्को शिकार गच्छदारले नेतृत्व गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी पनि पर्यो ।
''जेहोस गच्छदारले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कालो, नेप्चे ठेप्चेलाई मिसाएर पार्टीको बुट्टा भर्ने प्रयास गर्दैछन् ।''
नेपाल लोकतान्त्रिक र काङ्ग्रेसको एकीकरण पछि पहिलो पटक सानेपामा जिल्ला भरिका महासमिति सदस्यहरुलाई बोलाइयो । जिल्लाभरिका काङ्ग्रेसि नेताहरूको जमघटले सानेपाको माहुल निक्कै तातेको थियो । एकचोटि नेपालकै पुरानो र ठूलो पार्टीको त्यो भिडमा मैले आँखा दौडाए, त्यो भिडले धेरै कुरा बोलिरहेको थियो । यदि गच्छदार यो पार्टीमा आफ्नो पार्टी नमिसाएको भए त्यहाँ एउटै रङ्ग देखिन्थ्यो होला । जेहोस गच्छदारले काङ्ग्रेस पार्टीभित्र कालो, नेप्चे ठेप्चेलाई मिसाएर पार्टीको बुट्टा भर्ने प्रयास गर्दैछन् । यो चाहिँ सकारात्मक कदम लाग्यो ।
हामी एकछिन पछि पुराना थारु माननीय ज्युहरुसंग चिया पिउन होटेल तिर लाग्यो । त्यो दिन होटेलका कामदारहरु एकदमै व्यस्त थिए । हामी एउटा कुनामा बसेर चिया पर्खिरहेका थियो । अर्को कुनामा एउटा मोटो मान्छेले चर्को आवाजमा आफ्ना साथिहरुलाई भन्दै थियो ''अहिले हाम्रो पार्टीमा चण्डालहरु छिरेका छन्, अब चण्डालहरु छिरेपछि के हुन्छ ? पार्टी भाडभैलो हुन्छ कि हुदैन ? '' आफ्नो साथिहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्दै थियो । '' हेर्नुस्, हामी भनेको पुरानो काङ्ग्रेसि हो यो चण्डालहरुको बिश्वास गर्नु हुन्न ?'' त्यो मान्छेको हेपाइ यति धेरै थियो कि लागिराछ उहीँ नै पार्टीको मालिक हो अरु सबै कमैया । त्यो मान्छेको तल्लो शब्दले मुटुमा प्रहार गर्यो । मैले हाम्रा पुर्खाहरुले सारा जिबन काङ्ग्रेसलाई योगदान गरेको कुरा सम्झे । सानोमा रुख्वा रुख्वा भनेको शब्द कानमा गुञ्जियो । मेरो बाबाहरु बिना स्वार्थ चुपचाप रुखमा भोट हालेको सम्झे र त्यो मान्छेको कारण काङ्ग्रेस माथी घृणा पनि जाग्यो ।
सायद यस्तै सोच र गलत प्रवृत्ति भएका नेताहरुको कारणले गर्दा बिपिका बिचारहरुमा दाग लाग्दै थियो । अब काङ्ग्रेसको उच्च तहका नेतृत्वले गम्भीर रुपमा पार्टीको सुदृढीकरण बारेमा सोच्नुपर्छ । शोषक सामन्तीको पार्टीको बिल्ला भन्दा बाहिर आउनुपर्छ । अब काङ्ग्रेसले युग अनुसार आफ्नो पार्टीलाई सुधारेर डोर्‍याउन सक्नुपर्छ । काङ्ग्रेस पार्टी एकातिर खुम्चिदै गएको अवस्था अर्कोतिर पार्टी भित्रका गुट र उपगुटको लडाइँले काङ्ग्रेस कमजोर बन्दै गएको छ । सँकुचित सोचले पार्टी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । काङ्ग्रेसि अगुवाहरू सामन्ती र शोषक मानसिकताबाट बाहिर नआएसम्म काङ्ग्रेस पार्टी बिपिको पार्टी हो भनेर भन्न सकिदैन ।
काङ्ग्रेसि नेताहरूको गुट र उपगुटको चेपुवाबिच दौडिरहेको गच्छदार धेरै चुनौती र समस्यासंग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक र काङ्ग्रेस पार्टी एकीकरण गरेको बर्षैै बितिसक्यो । नेपाल लोकतान्त्रिकबाट १५ जनालाई केन्द्रिय सदस्य, ३०० जनालाई महासमिति सदस्य र २५ हजार जनालाई क्रियासिल सदस्य बनाउने सहमती भएपनि गच्छदारले आफ्नो सिट बाहेक कसैको सिट सुरक्षित गर्न सकेका छैनन् । काङ्ग्रेसि नेताहरूको गुट र उपगुटको चेपुवाबिच दौडिरहेको गच्छदार धेरै चुनौती र समस्यासंग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पश्चिमी थरुहट बेल्टमा हेर्ने हो भने गच्छदारले योगेन्द्र थारु, गोपाल दहित, मिनराज थारु जनकराज थारु, राम जनम थारुको काधमा टेकेर राजनिती गर्ने हुन् । यी नेताहरु बलियो हुनु भनेको गच्छदार बलियो हुनु हो । अब यहि कुरा क्रमशः योगेन्द्र, गोपाल दहित, मिनराज, जनकराज, राम जनमलाइ लागू हुन्छ ।
एकातिर यी नेताहरूको आफ्नो थर ठेगान नभएको अवस्था अर्कोतिर पुरानो काङ्ग्रेसबिचको अबिस्वास र अन्तर संघर्सले गर्दा गच्छदार लगायत यी सेकेन्ड लेभलका नेताहरूको राजनीतिक भबिस्य धराप पर्दै गैइरहेको छ । ग्राउन्ड लेभलका कार्यकर्तालाई कसरी सेभ लेण्डिङ गर्ने ? उनिहरुलाइ कसरी प्रशिक्षित गर्ने ? यी नेताहरूले कुनै ठोस रणनीति र योजना बनाको देखिएको छैन । नेता र कार्यकर्ताहरुको चरम असन्तुष्ट बढेको बढै छ । यो समस्यालाई गच्छदारले गम्भीरता पुर्बक लिएनन् वा समयमा पार्टीभित्र पार लगाउन सकेनन भने गच्छदार र उनका प्यारो थारु नेताहरूको राजनितीक यात्रा नेतृत्व नपाउदै समाप्त हुनेछ ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय आन्दोलन तयारी समिति
संयोजक युवा स्वयंसेवक
२०७६ भदौ १९ बिहीबार
टीकापुर, ‘त्यो हत्यारा, त्यो पुलिस मार्ने रेशम थारुको वकालत गर्नु हुन्छ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शाही आयोग जस्तै बनाउन लागेको काँग्रेस सभापति देउवाको आरोप
पुर्वसभामुख महराको बारेमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश
उपनिर्वाचनको समयमा मन्त्रीपरिषद बिस्तार भएकोमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण
पाचँ लाख घुस सहित कार्यलय निमित्त प्रमुख मण्डल पक्राउ